Ninkii DAHABKA doonayay (Qaybtii 1-aad) | Hadalsame Media
Home Madadaalada Ninkii DAHABKA doonayay (Qaybtii 1-aad)
Ninkii DAHABKA doonayay (Qaybtii 1-aad)
(Hadalsame) 29 Maarso 2019 – Bansir waa karneeto (gaari-faraseed) sameeye kaas oo aad uga niyad jabsan noloshiisa. Haddii uu geeesaha eegay waxaa u muuqanaya dadka gurigiisa, si murugo leh ayuu u eegayaa gurigiisa yar ee saboolnimadu ka muuqato. Waxaa kale oo u muuqda halka uu biraha ku tumo iyo karneetada uusan wali dhammaynin samaynteeda ee meesha u dhextaalla.
Xaaskiisa ayaa marar badan iridka guriga soo istaagaysa. Eegmadeeda duruufaysan ayaa laga dareemi karaa hadalka ku duugan oo ah in raashinkii dhammaaday lagana sugayo in uu si dhakhso ah u dhammeeyo karneetada si uu uga iibiyo dadka lacagta haysta, reerkiisana cunto ugu soo gado ama ugu soo iibiyo.
Si kasta oo ay tahayba jirkiisa oo ah mid qaro wayn, xoog iyo murqana ka muuqanayo ayaa derbiga isku tiirinaya. Maskaxdiisa tabarta daran waxaa ka dhexguuxaya waydiimo uu wax warcelin ah u la`ayahay. Qoraxda kulaylaha ee shiisha ah ee lagu yaqaan dooxada wabiga Furaat ayaa dhakada ka garaacaysa si waliba naxariis-darro ah. Dhididka ka shubmaya, garkiisa ayuu daad ahaan kusii marayaa isaga oo sidii qulqulkii ugu shubmaya kaynta timaha ah ee laabtiisa ku taalla.
Dhanka shishe ee gurigiisa waxaa ka muuqanaya guriga boqorka ee aadka u qarada iyo quruxda wayn. Dhinaca kale haddii uu eegayna waxaa u muuqanaya qasriga daruuraha ku dhexjira ee ah guri-diimeedka magaalada.
Qarsiyadaas hooskooda ayaa waxaa ku dhexyaalla gurigiisa aadka u yar iyo guryo dad kale oo ayaguna aad u sabool ah foolxumana ka muuqato. Magaalada Baabila oo dhan ayaa sidaas u dhisan, qasriyo cirka ku dhawaaday iyo buulal dhulka ku dheggan, dad hantidu ka tiro badatay iyo sabool aan cunto heli karinin, dhammaan waa la isku dhex qasanyahay ayaga oo aan wax qorshe iyo qaab ay u kala degganyahiin aan midna lahayn ayaa dhammaan derbiyo korka sare looga wada hareereeyey magaalada oo dhan si darbiyadaasi difaac ugu noqdaan.
Gadaashiisa haddii uu u soo jeensaday waxaa u muuqanaya gaari-faraseedyo ay wataan dad hantiilayaal ah kuwaas oo dadkii sayladda ka ganacsanayay iyo saboolkii cagaha-caddaa ay dhammaan u wada banneeyeen waddada ay marayaan. Balse isla markiiba dhammaan dadkii waxaa lagu wada dirqiyey in waddada loo banneeyo addoomada isdabajoogga ah ee mid walba uu xambaarsanyahay haan-biyeed buuxda oo harag ka samaysan taas oo loo wado in lagu waraabiyo beeraha lusha ee guriga boqorka.
Bansir aad ayaa uu ugu hawlaysanyahay (fooganyahay) dhibaatooyinka noloshiisa, waxa dhacaya oo dhanna waaba uu ka maqanyahay (mooganyahay) oo lama socdo, balse waa uu ujeedaa. Waxaa halmar dhagahiisu qabteen codka kaban la garaacayo oo aad moodid in uu aad u garanayo codka noocaas ah. Haddii uu eegay dhanka codku ka baxayay waaba kaban-garaacihii saaxiibkiis ahaa ee Kobbi oo u dhoolocaddaynaya.
“Eebbe madax-bannaanida ha kuu kordhiyo jaalkayga wanaagsanoow,” Kobbi ayaa gacanqaadis kalgacayl leh kusoo dhaweeyey kadibna hadalkiisii sii watay “Waxaaba marka hore kaa muuqata in Eebbe wanaag badan kuu galay waa adiga aan addoon lagu adeeganayo ahayne. Raynraynta madax-banaanidaas aynu haysanno ayaa aan kula qaybsanayaa.
Boorsadaada in ay cayilantahay waa ay ii muuqataaye intii aad gacanta galisid iga sii labo shilin-bireed oo amaah ah oo aan hubo in aan kuu soo celindoono habeenka iidda ah. Ma aad waayi doontid oo waa hubaal in laguu soo celindoono.
“Jaalkayoow haddii aan haysan lahaa labo shilin-bireed, cidba ma anigaa amaahin lahaa adigaba aad ahaatide (ilowse) kuma amaahiyeen; hanti ayaa ay ii ahaan lahaayeen, hantida kali ah ee aan haysto. Qofna hantida uu haysto oo dhan cid kale ma amaahiyo, cidda ugu dhawba ha ahaatee. Bansir ayaa hadalkaas si murugo leh ugu warceliyey.
“Yaah,” Kobbi ayaa qayliyey isaga oo ka yaabay hadalka Bansir, ka dibna hadalkiisii sii watay “Hal shilin-bireed ayaa aad la`adahay haddana halkaan ayaa aad sidii taalladii meel ugu tiirsantahay! Maa aad dhammaystirtid karneetadaan? Sidee kale oo carruurtaada aad cunto ugu heli kartaa? Sidii aan kugu aqaanay sidaan ma ahayn jaalkayoow. Meeday hawlkarnimadii kaa buuxi jirtay? Ma waxbaa kugu dhacay? Ma jirro ayaa ku haleeshay?”
Maya ee riyo ayaa I haleeshay, sidaan ayaana aan ku riyooday, Bansir ayaa hadalkii sii watay. “Riyada aan arkayo waa aniga oo ah nin aad loo wayneeyo. Waa aniga oo ay suunka iiga lulato boorso qurux badan oo haddana buuxda, shilin-bireedyo ka buuxaan. Waa aniga oo si madax-bannaani ah shilin-bireedyo ugu daadinaya tuugsadayaasha saboolka ah; waa aniga oo dhar ayni (nooc) walba leh ugu gadaya xaaskayga iyo waxii kale oo aan ka helo in aan iibsado; waa aniga oo haysta shilin-bireedyo aad u tiro badan heer aan u adeegsado sidii aan doono aniga oo aan gebi ahaanba ka baqaynin saboolnimo isoo foodsaarta ilowse hal maalin oo aayaha dambe ah.
Waa aniga oo dareemaya QANACSANAAN aad u tiro badan! waa aniga oo aan qaban shaqadaan dhabar-jabka ah ee aad igu taqaanid. Waxa aan ku riyooday xaaskayga oo aan lahayn habayaraatee duuduubka wajigeeda iyo duruufta adag ee nolosheeda iyo iyada oo dhoolo-caddaynaysa oo ay ka muuqdaan dhalaalkii iyo raynrayntii waayahii aannu is guursannay.”
La soco qaybta labaad ee qisadan Insha allah.
Xigasho: Buugga :The Richest Man In Babylon ( Ninkii Baabila Ugu Hantida Badnaa)
Turjamadii: Dr Jaamac Sahal
Previous articleHoggaanka & dadwaynaha New Zealand oo dunida dhowr arrimood baray!
Next articleKa warran haddii Muqdisho DERBI lagu wareejiyo?